Imisebenzi Eyizigidi Eziyi-12 Ilahlekelwe Ukuzenzakalela EYurophu Ngo-2040
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Imisebenzi Eyizigidi Eziyi-12 Ilahlekelwe Ukuzenzakalela EYurophu Ngo-2040
Ukuguga kwabantu, ukuncintisana okukhulayo, kanye nokukhiqiza okulahlekile ngenxa yalolu bhubhane kusheshisa ukwamukelwa kokuzenzakalelayo eYurophu. I-Forrester ibikezela ukuthi ama-34% emisebenzi yase-Europe asengozini futhi imisebenzi eyizigidi ezingu-12 izolahleka ngenxa yemishini ezenzakalelayo kulo lonke elaseYurophu-5 (eFrance, eJalimane, e-Italy, eSpain nase-UK) ngo-2040.
Ngenkathi ubhubhane luqhubeka nokucindezela amabhizinisi ase-Europe ukuthi atshale imali eningi futhi ngokushesha ku-automation, akuyona ukuphela kwesici esinomthelela ekulahlekeni kwemisebenzi okubikezelwe. Ngokusho kweForrester's Future of Jobs Forecast, 2020 kuya ku-2040 (Europe-5), abasebenzi abanamandla amancane okuxoxisana basengozini enkulu yokuxoshwa, ikakhulukazi emazweni lapho abaningi bengaphansi kwezinkontileka zemisebenzi evamile, okuhlanganisa nezinkontileka zehora eliyiziro e-UK, okungadingi amahora okusebenza aqinisekisiwe, noma imisebenzi yetoho enamaholo aphansi, njengokuthi “imisebenzi emincane” eJalimane.
Ukulahlekelwa kwemisebenzi ngenxa yemishini ezenzakalelayo kuzoba nomthelela omkhulu kubasebenzi base-Europe ezitolo ezinkulu, ezidayisayo, kwezokuthutha, endaweni yokuhlala, ezinsizakalweni zokudla, ezokungcebeleka nezokungenisa izihambi ngezinga elikhulu. Amandla aluhlaza kanye ne-automation, nokho, kuzodala imisebenzi emisha eyizigidi eziyisi-9 e-Europe-5 ngo-2040, ikakhulukazi emandleni ahlanzekile, izakhiwo ezihlanzekile, namadolobha ahlakaniphile.
Ukutholwa okusemqoka kufaka phakathi:
• Inani labantu asebekhulile laseYurophu liyibhomu lesikhathi. Ngo-2050, i-Europe-5 izoba nabantu abangaphansi kweminyaka yobudala eyizigidi ezingu-30 kunango-2020. Amabhizinisi ase-Europe adinga ukwamukela i-automation ukusiza ukuvala izikhala zabasebenzi asebekhulile.
• Ukwandisa ukukhiqiza kanye nokwenza ngcono umsebenzi oqhelile kuyinto ehamba phambili. Amazwe ahlanganisa iFrance, iJalimane, i-Italy, neSpain - lapho izimboni, ezokwakha, nezolimo zinikeza ingxenye enkulu yezomnotho wawo - zitshala imali eningi ekuzishintsheni kwezimboni ukuze kwandiswe umkhiqizo.
• Incazelo eqinile yomsebenzi isiqala ukubhidlika. Esikhundleni sokubheka i-automation esikhundleni somsebenzi, izinhlangano zaseYurophu seziqala ukuhlola kokubili abantu kanye namakhono emishini lapho zenza imisebenzi eyahlukene, okuhlanganisa ukuphatha, nokuvuselela izinhlelo ze-HR noma ukuklama izinhlelo zokuqeqesha. Nakuba imisebenzi izolahleka, imisebenzi izotholakala futhi iguqulwe njengoba amakhono amasha edingeka.
• Imisebenzi yezabasebenzi esezingeni eliphakathi ehlanganisa imisebenzi elula nejwayelekile isengcupheni enkulu yokuzenzakalela. Imisebenzi evamile yenza ama-38% abasebenzi baseJalimane, ama-34% abasebenzi baseFrance, kanye nama-31% abasebenzi base-UK; Imisebenzi eyizigidi ezingama-49 e-Europe-5 isengcupheni yokuzenzakalela. Ngenxa yalokho, izinhlangano zaseYurophu zizotshala imali emisebenzini enekhabhoni ephansi futhi zakhe amasethi amakhono abasebenzi. Amakhono athambile afana nokufunda okusebenzayo, ukuqina, ukubekezelela ingcindezi, nokuvumelana nezimo - okuthile amarobhothi akwaziwa ngakho - kuzohambisana nemisebenzi ezenzakalelayo yesisebenzi futhi ibe efiseleka kakhulu.
Ukuzenzekelayo Europe Spain
Ukugaywa kabusha ku-Mars: Kusukela ku-Old Packing Material kuya ku-New Poop
Ukukhumbula Ukudla Okuphuthumayo Kwe-Tiger Nuts Ye-Salmonella Evela Ekutheleleni Kwegundane
Imakethe Yezisetshenziswa Zezolimo Zamanje Nezakusasa...
I-Azul yaseBrazil: Ibhizinisi belihamba kahle ngo-Q1 2022
I-Tourism Malaysia izoheha imakethe yaseMpumalanga Ephakathi kuma-ATM...
Intengo ye-Fluorescent Pigment Market Outlook 2017...
Ukuhlolwa Okusha Kwezidakamizwa Ze-Antipsychotic Kwengqondo Ebucayi...
Ukuqapha Okusha Okuthuthukile Kwabantu Abaphila Nenhliziyo...
UPegasus uba bukhoma ne-IATA's Travel Pass on...
I-RFID Printers Market 2022 Abadlali Ababalulekile, Umsebenzisi Wokugcina...
Ikusasa elisha le-Global Aviation Saudi Arabia Style
Uhlelo lwe-WTTC Global Summit: Kwenzekeni e-Ukraine?
Usayizi Wemakethe Yokuxilonga nge-Covid-19, Ukwabelana kanye nomthelela...
I-IATA: Impi yase-Ukraine kanye ne-Omicron inesisindo sempahla yomoya
I-Russia ivala indawo yayo yendiza eya eBulgaria, Czech kanye ...
Amandla Okuphumela Ngaphandle Ukuze Uthole Impilo Engcono Yengqondo
I-Uganda Tourism yethula uhlobo lwayo olusha e-UAE
I-FDA Igunyaza Ukuhlolwa Kokuqala Kokuxilongwa kwe-COVID-19 Isebenzisa...